Ejiji ụwa: Ọrụ Taiwan na Sri Lanka na omenala ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Sri Lanka » Ejiji ụwa: Ọrụ Taiwan na Sri Lanka na omenala ụwa
Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Akụkọ Ejiji • Akụkọ Sri Lanka • Akụkọ na -agbasa Taiwan
N'October 6th, Izu Ejiji Taipei wepụtara n'ihu ọha "Ejiji nke Oge Anyị," ihe ngosi na-eduga ndị na-ege ntị ihe karịrị ọkara narị afọ nke ncheta ejiji Taiwan site na ihe nkiri mere eme na akụkọ foto.
Izu Ejiji Taipeh ga-egosipụtakwa ọrụ mbụ nke ndị nrụpụta Taiwan ama ama, na-egosi etu oge dị iche iche siri metụta ụlọ ọrụ ejiji ụlọ yana ka ejiji si egosipụta na Taiwan n'oge ndị a. Ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọdịbendị na -akwado ya, ihe ngosi Ejiji nke Oge Anyị sitere na 1950s, nke bụ afọ ọlaedo nke ụlọ ọrụ akwa akwa Taiwan, ruo n'oge a.
Site na mmeputa ihe ngosi akụkọ ihe mere eme, ngosipụta ejiji, na kọlụm nkọwa, ndị na -ekiri ga -enwe ike ịghọta akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ejiji Taiwan, yana ọnọdụ ọdịbendị na ihe ịchọ mma ya.
"Ndị na -emepụta ejiji n'ọgbọ dị iche iche, n'agbanyeghị ihe ịma aka n'oge dị iche iche na mmụba nke asọmpi ahịa mba ụwa, na -enwe ịnụ ọkụ n'obi na -enweghị ike ịkwụsị maka ejiji," Florence Lu, Curator nke Taiwan Fashion History kwuru.
Nchịkọta isiokwu nke Ejiji nke Oge Anyị na -akpọ ndị ngosi ka ha gafee ohere na oge ịlaghachi n'oge ochie nke ejiji Taiwanese. Site na ụlọ ọrụ akwa akwa na 1950s ruo taa mgbanwe mgbanwe dijitalụ na mgbasa ozi ejiji, ihe ngosi ahụ na -egosi ka ndị nrụpụta mpaghara na ụdị nwere wee gaa n'ihu na -eji ejiji iji kọwaa ọrụ Taiwan na omenala ụwa.
Na mbido ngosipụta Ejiji nke Oge Anyị, Taipei Fashion Week mekwara ememme 35th nke Taiwan Fashion Design Awards nke ụlọ ọrụ Development Industry, Ministry of Economic Affair na -akwado na Ọktọba 6.
Site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị sonyere 450 si n'ofe mba iri na asatọ gafere Europe, America, na Eshia, e gosipụtara rookies ejiji 18 na mmemme ngosi ihe ngosi siri ike.
Ihe nrite nke mbụ gara Gajadeera na Ruwanthi Pavithra si Sri Lanka maka ọrụ ha "Sustainable Fashion/Textile and Traditional Crafts". Ihe nrite nke abụọ gara Yeh, ọrụ Yu-Hsien “Mirage” na Chen, Ching-Lin “Ebee ka ifuru niile gara.” Taipei Fashion Week na-amalite site ugbu a ruo Sọnde, Ọktọba 17.